IZIMVO ZESANGO LEDRIVE (ISIKHOKELO SOKUGQIBELA) - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya Izimvo zeSango leDrive (Isikhokelo sokugqibela)
Kwesi sikhokelo sabelana ngemibono yesango lokuhamba ngeswidi, ukutyibilika kunye noyilo olunokurhoxiswa. Uza kubona iingenelo kunye neengozi zohlobo ngalunye lwezixhobo zokuqhuba ukunceda ufumane eyona ilungileyo ekhayeni lakho.
Amasango aqhubayo yinto phantse kuwo nawuphi na umninimzi onokuzuza kuyo. Kwelinye, banokongeza ukubamba kobuhle nakweyiphi na indlela yokuqhuba. Ngamaqondo ahlukeneyo, bathambekele ekwenzeni umendo ujongeke ubaluleke ngakumbi ngobukho babo.
Kungenxa yokuba benenjongo yobuhle akuthethi ukuba banqunyelwe ekubukekeni kuphela, nangona kunjalo. La masango aqhubayo nawo anokuya ngokwamanqanaba ahlukeneyo, anike ukhuseleko kunye nemfihlo kubanini bamakhaya ngokunjalo. Awufuni ukukhetha ngokungaboniyo amasango aqhubayo ekhayeni lakho. Kukho izinto ezithile ekufuneka uzazi eziza kukunceda ufumane isango elingasebenzi kuphela kodwa elilungele iimfuno zakho ngokunjalo. Apha, siza kujonga ezinye zeembono eziza kukunceda unciphise inani elinobuninzi bokukhetha kwisango lokuqhuba lamaphupha akho.
Uyilo lweSango lokuqhuba
IiSango eziShukumayo zokuqhuba
Amasango e-Swing kwiiNdlela eziDibeneyo
Amasango eSwing angatshatanga Vs. Amasango amaSwing aBini
Amasango aBucala eNdlela yokuHamba
Amasango oKhuseleko eDriveway
IiGates zeDrayivu yokuSonga
Isango eliphathekayo leeDriveways
Ukutyibilika kwiSango leDrayivu
Amasango eSilayidi eV-Track
Amasango eSilayidi esiTyhubela uMva ngasemva
IiCantilever Sliding Gates
Amasango eDriveway aRhoxisiweyo
IiGates eziQengqelekayo zeNdlela yokuQhuba
Amasango eSola eeDriveways
Ukhetho lweSango lokuGqibela Vs. Iindlela eziQhelekileyo zeDriveways
Iindidi zeSango lokuqhuba
Amasango eNdlela yokuqhuba
IiGates zeMetro yeNdlela
Amasango eAluminiyam aSendleleni
Amasango e-Iron Drayivu
Ikhonkco leNdlela yokuSebenza ngeDreyini
Amasango eVinyl Drayivu
Amasango eDrayivu eDrayivu
Ukuvula iiSango eziZenzekelayo
Isitayile seNdlela yokuHamba kweNdlela
Amasango ePivot aMi nkqo
Nkqo Phakamisa Amasango
Iindleko zeSango lokuqhuba
Xa isiza iintlobo zeendlela zokuqhuba , kwaye namasango abo awuphelelanga kuhlobo olunye loyilo. Ngapha koko, kukho inani leentlobo zamasango kwintengiso. Isango ngalinye kula lifuna indawo eyahlukileyo yokufaka kunye nokusetyenziswa.
Okokuqala, makhe sijonge kumasango e-swing driveway. La masango aqhubayo asebenza ngokuchanekileyo njengoko igama lisitsho; bajike bavule kwaye bavale ukuvumela iimoto ukuba zingene kwaye ziphume kwindlela yokungena kanye njengocango oluvulekileyo okanye oluvaliweyo ukuze kungene umntu okanye aphume kwigumbi.
Inqaku elibaluleke kakhulu ekufuneka ulwenzile xa ufaka amasango e-driveway ajikelezayo kukuba awufuni ukuba bajike bavule ukuvala ukugcwala. Beka enye indlela, ukuba uthe wajika amasango endlela ekupheleni kwendlela yakho, awufuni ukuvula la masango ngasendleleni. Endaweni yokuba uya kufuna ukuvula la masango ngasendlwini apho kunqabile ukuba abangele umba.
Ukuba ufuna amasango avulekileyo ngaphandle kunangaphakathi, qiniseka ukuba uwaseta kwikhefu kwindlela. Ngale ndlela, xa bevula baya kuhlala kwipropathi yakho kunokuba bathintele ukuhamba kwetrafikhi. Okona kuncinci, eli ikhefu kufuneka lilungiselele ujingi lwesango. Ngumbono olungileyo ukongeza iinyawo ezimbalwa ezongezelelweyo ukuqinisekisa ukhuseleko, nangona kunjalo.
Ukufikelela kububanzi bendawo oyifunayo kula masango, ihlala ingekho kangako ububanzi besango okanye amasango ngokwawo. Oku kungenxa yokuba uninzi lwamasango ajikelezayo ahamba ngokuvula amasango kwi-arc engama-90 ngaphakathi nangaphandle. Abayijingi kude kube ngoku benze umgca ngokuvulwa kwendlela, ukuze bangathathi gumbi lingaphezulu.
Amasango e-Swing nawo ngamasango ekufuneka ngokubanzi afakwe kwindiza ethe tyaba. Ke, unokujonga kuphela ukujija amasango endlela ukuba indlela yakho ikwinqanaba. Cinga ngoku: ukuba indlela yokuhamba ayicaba kwaphela, kukho ithuba lokuba xa uvula okanye uvale isango elijingayo linokukrwela umhlaba okanye lide libambeke. Nangona kunjalo, kukho uyilo olunokuthi luhambise indawo ethe tyaba kwindlela yokuhamba enokufuna ufakelo olukhethekileyo.
Kulabo abanee-driveway ezi-sloped, kukho iindlela ezimbalwa ezongezelelweyo. Ukuphakamisa amasango e-swing lolunye ukhetho olunjalo. La masango enzelwe ukuvula ukuze kulungiselelwe indawo evulekileyo. La masango kunokuba nzima ukuwafaka kwaye ukuba uyawafuna, kungcono ukushiya kubaqeqeshi ukuze kuthintelwe naziphi na iingxaki eziza kunye nokungazinzi kolu hlobo lwamasango ajikelezayo.
Ukuphakamisa kunye nokujikeleza amasango lolunye ukhetho olukhulu ukuba uhlala kwindawo apho ujongana nekhephu elininzi elinokuthintela amasango ajike. Ngaphambi kokuba ungene kwindlela la masango asebenza ngayo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ezi zibiza kakhulu xa kuthelekiswa namanye amasango e-swing ngenxa yetekhnoloji ebandakanyekayo.
Ukuphakamisa kunye nokujikeleza kwamasango kusebenzisa ukusetyenziswa kwesinyusi esisixhobo esisebenza ngamanzi. Esi sinyusi siphezulu sinyusa amasango kancinci ngaphambi kokuba siwavule kwaye siqhubeke sinyusa njengoko sivula yonke indlela.
Isango elinye lokujika-Jonga kwi IAmazon
Zimbini iintlobo eziphambili zokujika amasango endlela. Oku kubandakanya isango elinye lokujikeleza okanye iseti yamasango ajika kabini.
Isango elinye lokujika lenziwe ngesango elinye kufana nomnyango wegumbi lokulala. Ezi zicetyiswa ukuba zibe ziimitha ezili-16 ububanzi okanye ngaphantsi. Abanye abasebenzisi besango bayalivumela isango leenyawo ezingama-20 okanye ngaphantsi ububanzi.
Isango elijinga kabini-Jonga kwi IAmazon
Amasango ajika kabini kukukhetha uninzi oluhamba nalo ngenxa yoyilo lwazo oluhle ngakumbi. Amasango ahamba kabini enziwe ngamasango amabini kufana neengcango zaseFrance. Ngokudibeneyo, la masango anobubanzi obucetyiswayo obufanayo njengesango elinye lokujija kodwa umlinganiso wahlulwe phakathi kwamasango amabini.
Ukugcina amasango ekhangeleka ekhangeleka, la masango kufuneka alingane ngobukhulu. Njengomzekelo, ukuba uzama ukwenza isango elijingayo eliphindwe kabini leenyawo ezili-16, ungasebenzisa isango elinamasango ali-8 ubude ubude.
Ngelixa amasango okuhombisa asebenzisa iimilo ukuvumela abantu ukuba babone ngesango kwelinye icala kunokuba kuhle. Nangona kunjalo, ayisiyiyo le nto umntu ayifunayo kwisango lokuqhuba. Abanye bakhetha isango elisebenza kakhulu njenge ucingo lwabucala ; ukungavumeli amaqela angaphandle ukuba abone ngaphaya kwesango nakwipropathi yomninikhaya.
Impendulo yale minqweno yomninikhaya kukusetyenziswa kwesango lokungena ngasese. La masango aqinile kunokuba avumele nabani na ukuba ajonge kwelinye icala ukuya kwelinye. Amasango anje ngezi ahlala endaweni ende kwaye aqinisekise ukuba akukho mntu ujonga ngaphezulu nokuba kungaphezulu.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba la masango ayilula, iindonga eziqinileyo. Zihlala zingenzelwanga ukuba zibe nomtsalane ngaphandle kokuchukumiseka koyilo okwenza indawo evulekileyo.
Isango lokhuseleko lokuqhuba -Bona IAmazon
Ngokufana nohlobo lwabucala, amasango okhuseleko ahamba ngendlela eyenzelwe ukukhusela abantu abangafunekiyo kwipropathi yakho. Amasango okhuseleko kufuneka akhiwe kakuhle kwaye ibe nezixhobo ezikumgangatho ophezulu ukuze zikhusele ngokwaneleyo. Oku kuthetha ukuqesha ikhontraktha enobuchule kulwakhiwo kunye nofakelo. Ezi ntlobo zamasango zihlala zilawulwa ngolawulo olukude okanye iphedi yokuvumela ukungena ngokukhawuleza.
Kukho iindlela ezingaphezu kwesinye zokuvula amasango. Ngapha koko, okomzuzwana, siza kujonga ezinye iindlela ezininzi ezinokuthi ziyilwe ngamasango. Enye indlela yokuba amasango anokuqwalaselwa ukuba avule njengokugoqa indlela yamasango.
La masango ahlukaniswe ngaphezu kwesihlandlo esinye ngeehenjisi ngokwawo kunokuba kwindawo enye yeepivot. Xa kuvulwa, la macandelo asongelana kwenye kwaye xa evaliwe, ayibuyisela umva inkqubo kwaye angavali ukuvala indlela.
Amanye ala masango asongeke ngokukhululekileyo. Oku kuthetha ukuba bayasonga ngaphandle komkhondo wokubakhokela. Ngokuqhelekileyo, nangona kunjalo, zisetelwe kwiitreyini ukuze xa zisonga ngaphandle okanye zivale zivaliwe, zilawulwe kwaye aziyi kujikeleza ngokukhululekileyo.
Ikhithi yokuhambisa imoto -Jonga kwi IAmazon
Ukufakwa ngokupheleleyo kwesango lokuhamba kunokuba lixesha elide okanye kude kube sisigqibo esisigxina kubanini bamakhaya. Njengoko unokuthelekelela ngeli nqanaba, nangona kunjalo, kukho ukhetho kuwe ukuba awufuni nto ifuna ukuzibophelela okungako.
Amasango aphathwayo endlela yokuhamba ziisango ezinokuthi zibekwe ngokulula kwaye zithotywe ngokulula. Ezi zinto zisebenza ngokufanayo nakweliphi na elinye isango eliphathekayo- njengesango losana- kwaye zinokucwangciswa kwimizuzu nje embalwa njengoko zihlala zinendawo yazo yokuma okanye zihlala amavili.
Kukho ukwehla kwamasango ahanjiswayo. Okokuqala, azinkulu kakhulu xa kufikwa kukhuseleko. Oku kunengqiqo kuphela kuba ukuba into inokuthathwa phantsi ngamanyathelo ambalwa alula, ayizukuba yindlela entle yokugcina umntu ngaphandle.
Elinye inqaku lokukhutshwa kwezinye kukuba amasango aphathwayo aqhelekanga ziimoto. Apho amasango azinikeleyo ahlala esabela kufakelo lwe-elektroniki malunga nokuba uza kuvula nini kwaye uvale nini, amasango aphathwayo aqhele ukwenziwa ukuba asuswe emzimbeni.
Isilayidi sendlela yokuhamba eshukumayo-Jonga ku IAmazon
Ngoku, makhe sijonge kumasango esilayidi. La ngamasango, njengoko igama lisitsho, isilayidi sivulekile kwaye sivalekile. Ngaphakathi kolu luhlu, kukho amacandelwana ambalwa anje ngamasango ezilayidi ezizenzekelayo, ii-V-track amasango ezilayidi, amasango esilayidi ngasemva, kunye namasango esilayidi seetayile
Amasango esilayidi azenzekelayo yile nto ayivayo ngathi- atyibilika kwicala elinye elithe tyaba okanye elinye ngokuzenzekelayo. Oku kubulela kumavili anceda ukuhamba kwawo. Xa kuziwa kubungakanani, olu hlobo lwesango lokuqhuba lufuna isuntswana. Kungenxa yokuba uyakufuna indawo eyoneleyo ukuze isango lingene xa livulekile kwaye livaliwe. Ngamanye amagama, uyakufuna indawo eyandisiweyo ngaphaya kwendlela yakho kwicala lesango elihamba lilingane nobubanzi bendlela yakho yokuhamba kunye neenyawo ezi-3 zendawo eyongezelelweyo.
Njengolunye ukhetho, amanye ala masango enziwa ngohlobo lokuba kuvulwe isiqingatha sesango kuphela. Ukuba ubunendlela yeenyawo ezingama-20, unokusebenzisa isango elivula iinyawo ezili-10. Endaweni yokuba eli sango liphume liye ecaleni lendlela yokuhamba, ibiya kudibana nje nesango elimileyo elishiyekileyo.
Amasango esilayidi e-V-track zezona ziluhlobo luqhelekileyo lwesango lesilayidi eziqhelekileyo xa ujonge kumasango esilayidi azenzekelayo. Ezi ntlobo zamasango zifumana amagama azo ukusuka phezulu kwaye ziphakamise kancinane imilo yomkhondo.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, ezi ntlobo zamasango zithatha indawo encinci njengoko ufuna indawo eyoneleyo yokuba amasango ahlale xa evulekile. Kwakhona, uyakufuna iinyawo ezintathu ezongezelelweyo zokuvula isango lombane. Amasango e-V-track anokusetyenziswa kunye nolunye ukhetho ekuxoxwe ngalo ngaphambili.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-V-track amasango esilayidi awasayi kusebenza ngokufanelekileyo ukuba umkhondo awucacanga. Ke, ukuba uhlala kwiimeko ezinekhephu, oku akunakuba lilo isango lakho.
Okulandelayo ngamasango wombhobho wesilayidi ongasemva. Ezi ntlobo zamasango zixhaphake kakhulu ngamasango asezantsi. Umzekelo, ucingo lwekhonkco olulula. Ezi zidinga indawo enkulu nje ngesango lesilayidi se-V.
Into ebalulekileyo ekufuneka uyiqaphele malunga nezilayidi zomzila wombhobho ongasemva kukuba isiphelo sesango kufuneka sibe namavili amabini. Ezi vili zixhonywe kwimibhobho efakwe kwi iipaneli zocingo ngokwabo. Kwelinye icala lesango, indibano yenqwelomoya kufuneka ibe nevili elinye lerabha ngelixa elinye ivili kufuneka libe liV-track yevili. Isango akufuneki lihambisane nalo naluphi na olunye uqwalaselo.
Ngoku, ungene kumasango esilayidi se-cantilever. Khumbula indlela esathi ngayo i-V-track amasango esilayidi ayizizo ezilungileyo ukuba uhlala kwikhephu okanye iimeko ezinomkhenkce apho umkhondo uya kuvalwa? Ewe, amasango e-cantilever lukhetho kwaba bantu.
Isizathu sokuba le yimeko kukuba amasango e-cantilever-ngokungafaniyo no-V-track amasango esilayidi kunye namasango wombhobho wesilayidi ongasemva - awunawo amavili emhlabeni. Iivili ezikwisango leekhareji zikwisithuba esime nkqo kunye nesango eliphakathi kwazo. Xa ezi vili zihamba, zikhokela isango livulekile okanye livaliwe.
Kukho isithuba esisezantsi samasango eecantilever, nangona. Oko kukuthi, bafuna indawo eninzi, ngaphezulu kwayo nayiphi na enye isango lesilayidi sokuhamba. Isango ngokwalo kufuneka libe malunga ne-150% enkulu kunobubanzi bendlela. Ngamanye amagama, ukuba ubunokuvula i-16 yeenyawo, isango lakho liya kuba ziimitha ezingama-24 ubude.
Kweli candelo lonke, siqwalasele iinketho ezahlukeneyo zamasango. Ngoku, masikhe sithathe umzuzwana ukuqwalasela ezinye iindidi ezimbini ezahlukeneyo zamasango atyibilikayo: amasango ahlehlekayo okurhoxisa amasango kunye namasango ahamba ngendlela.
Okokuqala, amasango ahanjiswayo ahlehlayo. Olu luhlu olunokuthi ukhetho olunje ngamasango e-V-track okanye amasango wombhobho ongasemva wesilayidi awela kuwo. Oku kusebenza kwimizila enamavili ahambahamba ukuhambisa isango elityibilikayo.
Amasango ajikelezayo awaxhomekeki kumkhondo. Ngokungafaniyo nesango elifana ne-V-track sliding gate okanye amasango wombhobho wesilayidi ongasemva, la masango aqengqeleka ngqo emhlabeni. Oku kwenziwa ngeerabha okanye ngamavili azaliswe ngegesi.
Okwangoku, kufanele ukuba kukhankanywe ukuba ezi ntlobo zamasango kufuneka zixhaswe ukuze zivule ngaphandle kongenelelo lwencwadi. Oku kunokuba yindleko enkulu ukuba uxhomekeke kwityala lakho lombane ukuze uqhubeke.
Ngenye indlela, cinga ukusebenzisa amandla elanga ukuqhuba amasango akho okuqhuba. Oku kutsalela amandla elangeni emini ngokusebenzisa iiphaneli zelanga ukusebenzisa amandla okuqhuba umqhubi wesango lakho. Oku akusebenzi kuphela unyaka wonke, kodwa kukwabiza imali encinci kakhulu kuneendlela zesiko zamandla. Abaqhubi besango lesango lenjongo yelanga banokubiza ngaphezulu xa kufakwa.
Ukhetho lweSango lokuGqibela Vs. Iindlela eziQhelekileyo
Xa ukhetha isango lokuhamba, kukho izinto ezahlukeneyo ekufuneka uziqwalasele. Kubantu abaninzi, ayililo neliphi isango eliya kwenza. Olunye uguquko olunokuthi luthathele ingqalelo kukuba i-driveway yakho kukudubula ngqo okanye ukuba kugcwele ukujija kunye nejika.
Iidriveways ezithe tye, ngokucacileyo, zikhona kumgca othe tye. Oku kuqhelekile xa kufikwa kumakhaya amancinci okanye amakhaya anendawo encinci yepropathi. Zingasetyenziselwa ubuhle ngenxa yokuba zinokufakwa ngokulula kwimithi okanye ezinye izinto zoyilo. Iindlela ezihamba ngqo azihlali zivumela iimoto ezininzi okanye ukuhamba kakhulu kwezithuthi.
Iidriveways ezijijekileyo zihlala zivumela iimoto ezininzi kunendlela elula ethe tye kwaye zihlala zisetyenziswa xa amakhaya efuna indlela ende.
isimemo sokuziphatha somtshato weshawa
Eyona nto ithathelwa ingqalelo apha kukuba ufuna ukuba isango licoce yonke indlela. Ukuba unendlela egoso-goso, uya kufuna ukuqinisekisa ukuba usebenzisa isango lokuqhuba elinje ngesango lokujija elingavimbeli ndlela xa uvula. Xa kufikwa kwindlela ezijijekileyo apha, i-engile ejikeleza indlela yokuhamba okanye indlela egobileyo ngayo kubalulekile ukuba uyiqwalasele.
Kukwabalulekile ukuba uqwalasele ukuba yeyiphi indlela eyenziwayo. Indawo yokuqhuba enomgangatho ongaphezulu ofana netela okanye ikhonkrithi, amasango okuhlala asezantsi ahlala kakuhle. Ukuba indlela yokuqhuba ineendawo ezingaphantsi ezinje ngegrabile okanye ilitye elirhabaxa, unokufuna ukusebenzisa isango lokuqhuba elibekwe phezulu kancinci ukuze ungazitshisi izinto zokuqhuba. Oku kuhlala kuthathelwa ingqalelo kuphela xa igrabile okanye ilitye lifunjelwe phezulu. Nokuba yeyiphi na indlela, kufanelekile ukuba kubekho ukucoca oku-3-intshi ubuncinci phakathi komphezulu wendlela yokungena kunye nasezantsi kwesango.
Njengokuba kukho iintlobo ezininzi zoyilo lwesango, zininzi iindlela onokukhetha kuzo xa kuziwa kwinto ofuna ukuba yenziwe ngayo la masango. Kanye njengoyilo lwesango, zonke ezi zinto ziza nezibabalo kunye nezibi.
Inketho yokuqala yezinto eziphathekayo kwisango lakho lokungena ngumthi. Iinkuni lukhetho olukhethekileyo kwaye lubhetyebhetye.
Eyona ndawo inkulu yokuguquguquka komthi kukubonakala kwayo. Kuxhomekeka kuhlobo lomthi okhethwe kwisango lokungena, ukuphela kwemveliso yokhetho lomthengi omnye kunokuba nombala ohluke ngokupheleleyo kunye nokuthungwa kunomnye umthengi.
Umthi uhlala usetyenziswa njengokukhetha isango lokuhamba ngasese. Kungenxa yokuba umthi uqobo uyilelwe kubume bawo nakumphezulu wawo endaweni yokuba ubunjwe njengesinyithi. Ke, uyilo luhle kwaye alunikezeli ngokudlula kumbono kwiyadi yakho.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, nganye yezi zinto zinengxaki. Ngomthi, kukho isibini. Okokuqala nokuphambili lixabiso. Iinkuni zinokubiza kakhulu kunezinye izinto ezinje ngealuminium. Ngelixa isango lomthi elilula lingenakho ukuqhuba ityala lakho liphezulu kakhulu, iinkuni ezenzelwe kakhulu kwaye ezixabisekileyo zinokongeza kwiindleko. Kukwanobunzima, ekunokuthi abanye abanini bamasango aqhubayo bangabi ngabalandeli.
Ukuguqula isango leenkuni-Jonga kwi IAmazon
Kukwakho umxholo wokugcinwa. Umthi uvalwa ngokutywinwa xa usetyenziswa kwizicelo ezinje ngamasango kunye neengcingo kodwa oko akuthethi ukuba kuza ngaphandle kweziphene. Isenotyekelo lokuqhekeka kunye nokujijisana. Oku kuthetha ukuba ukuba ufuna ukugcina isango lakho leenkuni libukeka lihle njengokutsha, kuya kufuneka ulungiselele ukugcinwa rhoqo xa kuthelekiswa nezinye izinto onokukhetha kuzo.
Amasango okuhamba kwesinyithi yenye into ethathelwa ingqalelo ngabanini bamakhaya. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwegama lesinyithi kuyinto engacacanga. Kungenxa yokuba kukho iintlobo ezininzi zesinyithi ezikhethwa ngabanini bamakhaya abafuna ukongezwa kwesango lokuqhuba.
I-Aluminium lukhetho oluqhelekileyo phakathi kwabo bafuna isango lokuhamba ngesinyithi. Kukho izizathu ezimbalwa eziqinisekileyo zokuba kutheni ialuminium lukhetho olufanelekileyo. Kukho izibini ezisezantsi kwisinyithi ngokunjalo.
Ukuqala, makhe sijonge izibonelelo zealuminium. Ngokungafaniyo neenkuni, ialuminium ayinobunzima - ingekuko ngokuthelekisa iinkuni kunye nealuminium kodwa ngokuthelekisa ialuminiyam nezinye izinyithi. Oku kuthetha ukuba amasango akho awuyi kuba nomcimbi wokugungqa phantsi kobunzima bawo kwaye ngekhe babe nengxaki enkulu ngokulungiswa gwenxa.
mrs vs uphoswe vs ms
Ukongeza, i-aluminium kulondolozo olusezantsi kuba ayinakwenzeka ukuba irusi njengezinye izinyithi. Eyona nto ibaluleke kakhulu, lukhetho olufikelelekayo ngokufanelekileyo.
Njengoko sele kuphawuliwe, kukho ubukho kwialuminiyam ngokunjalo. Enye yezona zikhulu kukuba i-aluminium ayomelele xa kuthelekiswa nezinye izinyithi. Oku kunqongophala kokuzinza kuhambelana nabanini abaninzi, ngakumbi abo bafuna isango lokungena elibabonelela ngokhuseleko.
Ukwenza amasango endlela yesinyithi lolunye ukhetho. Xa abaninzi becinga ngentsimbi eyenziwe, bacinga ngamasango ayilwe kakuhle kakhulu, kwaye oku kunokuba njalo. Isinyithi esenziweyo sinokusetyenziselwa ukhetho olulula, oluthobekileyo ngakumbi. Esi sisibonelelo sokuqala samasango esinyithi esenziwe ngobunkunkqele kugqithiso kuyilo.
Ngokuchasene noko, ezi zoyilo kunqabile ukuba zithethe ukuba abo bafuna isango lokungena ngasese, intsimbi eyenziweyo isenokungabi yinto oyifunayo.
Ngelixa ialuminium ayomelelanga ncam, intsimbi ebunjiweyo lukhetho oluhlala luhleli. Ukuba ujonge ukhuseleko okanye isango eliza kuma kwimozulu embi, intsimbi eyenziweyo lukhetho olufanelekileyo. Oko akutsho ukuba intsimbi eyenziwe ayifuni ukugcinwa. Olona lolondolozo lukhulu kukuba isango liya kufuna ukucoceka kwaye ligqunywe ukuthintela umhlwa. Ndwendwela eli phepha ukuze ufunde ngakumbi malunga iindlela ezishushu yeendawo ezinemozulu embi.
Eyona mpazamo inkulu yentsimbi eyenziweyo yinkcitho yayo. Ayisiyentsimbi ebunjiweyo kuphela ebaluleke ngaphezu kokhetho olunjengealuminiyam enkosi kubude bayo, ikwanobunzima. Oku, njengasesangweni leenkuni, yenza ufakelo lube nzulu ngakumbi ngokwenza ukuba lubize ngaphezulu. Kufuneka kuqatshelwe ukuba amasango e-ironway acwangciswe ngobuchule ngakumbi anokuxabisa ngaphezulu kokulula.
Umsebenzi wesango lesinyithi
Unokufumana isango lesimbo esenziwe ngesinyithi esinyithi esibonelela ngokuqina kunye neepropathi ezinganyangekiyo nomhlwa ngexabiso eliphantsi. Enye inketho yipoda edityanisiweyo, isango elihlanganisiweyo elinokubamba kakuhle phantsi kwimozulu embi.
Inketho yokugqibela yesinyithi esiza kujonga kuyo kukudibanisa ikhonkco kwindlela yokuhamba. La masango ahlala enziwe ngentsimbi. Le yenye yezona ntlobo zixhaphakileyo zokubiya kunye namasango kodwa isebenza njani njengesango lokuqhuba, ngakumbi?
Xa kuziwa kwindleko, ikhonkco lokudibanisa ikhonkco kunokuba nobubele kwisipaji sakho. Kukwanjalo, njengoko kukhankanyiwe nje, kwenziwa ngentsimbi esisangqa. Oku kuthetha ukuba ikhutshiwe ukuyikhusela kwiingxaki eziqhelekileyo zesinyithi ezifana nerusi.
Ukubonakala kwekhonkco lekhonkco akuyona into yokuba wonke umntu uyavuya. Inokupeyintwa ngenkangeleko eyahlukileyo, kodwa ayizukutshintsha kuyilo lwayo.
Kukho neenkxalabo malunga nemfihlo kunye nokhuseleko. Ukuya kuthi ga kubucala, akukho kuninzi kunokwenziwa. Ikhonkco lekhonkco kunokuba libone kwaye ngokwalo, alizukubonelela ngasese kakhulu. Xa kuziwa kukhuseleko, ikhonkco lokudibanisa aliloncedo kakhulu nokuba kunganyuka ngokulula. Oku kunokuncedwa ngokudibanisa ucingo olunameva kodwa oku akusoloko kusetyenziswa kwiindawo zokuhlala kwaye abaninimzi abaninzi abayithandi inkangeleko enika isango nayo.
Izinto zokugqibela esiza kuzijonga apha yivinyl. IVinyl yinto yokwenziwa, ngenxa yoko isebenza ngokwahlukileyo kunesinyithi kunye neenkuni. Ngale nto engqondweni, isibonelelo sokuqala se-vinyl kukuba iyaguquguquka xa isiza kuyilo. Uyilo kunye nemibala zinokusetyenziswa gwenxa ukuze zilungele iminqweno eyahlukeneyo yabanini bamakhaya.
Amasango eVinyl nawo kulula ukuwagcina. Akunzima ukucoca amasango e-vinyl kwaye ayizukurusa njengensimbi. Ngelishwa, ilanga linokuthatha umthwalo kwi-vinyl ebangela ukuba iqhekeke kwaye iphele. Ukunyaniseka, abaninzi abavelisi banikezela iwaranti ngaphezu kokuwohloka kwendalo. Ukuba isango le-vinyl driveway liyonakala, kunokuba nzima ukulungisa ngaphandle komthungo.
Ukuya kuthi ga kubucala, ivinyl inokubonelela kakhulu. Oku ikakhulu kubulelwe kukungangqinelani esele kukhankanyiwe ngaphambili kuyilo.
Enye yeengxaki ze-vinyl yindleko zayo. Kuba kulula ukwenza nantoni na umthengi anokuyifuna, iindleko eziza nayo ziphezulu. Nokuba kulungiselelwe ukwenziwa kwangaphambili kwale nto, iya kuza nentwana yexabiso lentengo. Njengazo zonke iintlobo zezinto ezinokusetyenziselwa isango lakho lokuhamba, nangona kunjalo, siya kuyenza into yokuxabisa amaxabiso kamva.
Iingcebiso kubakhi abaninzi bezilumkiso xa bejonga ukuthatha amasango aqhubayo njengeprojekthi yokwenza ngokwakho. Ngelixa amasango eendlela zokuhamba ayisiyo-DIY ekufuneka ithathwe kancinci, ukubakho kweekhithi zesango lokuqhuba kwe-DIY kuvumela abanini khaya ukuba balawule ukufakwa kwabo. Ngoku, masithathe umzuzwana ukujonga indlela yokusebenzisa la masango e-DIY driveway.
Ukuqala, funda iwaranti kunye nencwadana yemiyalelo ngononophelo olukhulu. Ezinye iinkampani zilahla iiwaranti zazo ukuba ufakelo alwenziwanga yingcali.
Thatha ixesha lokulinganisa umhlaba. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, kunokuba nzima ukufaka amasango ukuba kukho ithambeka elisendleleni. Okona kuncinci, qiniseka ukuba kukho ukwehla kunenduli. Ukutyibilika kwamasango, qiniseka ukwenza oku kwicala lamasango kwaye kubalulekile ukujikisa amasango kwicala avula ngalo.
Emva koko, uya kufuna ukuthatha imilinganiselo yezithuba. Kufuneka kubekho imiyalelo kwincwadana yomvelisi yokuba iiposti kufuneka zifakwe phi kwaye njani. Oku kungohluka ngokuxhomekeka kuhlobo nemodeli yesango olithengileyo. Ezi zithuba zihlala zinendawo ephawulweyo apho amasango aya kuma khona ezantsi. Ukuba abenzi njalo, qiniseka ukuba banokususwa kwe-intshi ezintathu.
Emva kokulinganisa, awungekhe uqhubeke phambili kwaye uqale ukumba imingxunya yeposi. Ngaphambi kokuba wenze, fowunela abaphathi bendawo ukuze uqiniseke ukuba akukho nto inokukuthintela ekumbeni okufana nomgca ongaphantsi komhlaba. I-post hole digger lolona khetho lufanelekileyo ukwenza imingxunya xa sele ukulungele. Bamba ii-intshi ezi-6 ubunzulu kunokuba kufuneka ukuzalisa ngekhonkrithi ukutshixa iiposti endaweni nangaphezulu.
Ukubeka iiposti, sebenzisa i-plumb-bob kunye nenqanaba lokuqinisekisa ukuba zime nkqo ngokuthe tye kwaye zilungelelanise ngokuthe tye ngaphambi kokwenza nawaphi na amanyathelo asisigxina. Jonga kabini yonke imilinganiselo yakho. Nje ukuba waneliseke yile milinganiselo, galela ikhonkrithi ngaphakathi kwaye mayiyihlale ubuncinci iiyure ezingama-48.
Okokugqibela, ukufaka amasango ngokwawo, landela izikhokelo zamasango owathengileyo. Iseti nganye yamasango yahluke kancinci ukuze imiyalelo ngokubanzi ihlala ingenakuyenza.
Amasango okuqhuba awanako ukuzimela ngokwawo; badinga iipali, iiposti, okanye iikholamu zokubaseta kwaye, ngamasango e-swing, basebenze njengendawo ephambili. Oko akuthethi ukuba kufuneka babe lula.
Amaxesha amaninzi ukuba amasango aqhubayo axhaswa ziindonga ezilula ezimileyo. Endaweni yokuba zixhaswe ziingceba zoyilo ezihambelana nendlela yesango. Isango eliqhelekileyo lokuhamba ngomthi linokuzaliswa ngeekholamu ezintle.
Ngelixa iiposti kunye neekholamu zinokwenziwa zithandeke, ukusetyenziswa kwesikhuselo se-pier kungaphakamisa inkangeleko yesango. Iminqwazi yeepier ziyilelwe iziqwenga ezingaphezulu kwento enokuba yikholamu esemgangathweni.
Isango elinye lokuvula isango - Jonga kwi IAmazon
Xa usebenzisa amasango e-driveway ngokuzenzekelayo, kuya kufuneka ukuba uvule kwaye uvale amasango. Xa kuziwa koku, unokukhetha ezimbalwa.
Inketho yokuqala zii-sensors. Njengomzekelo, ezi zihlala zibonakala kwimvume kuphela kwegaraji zokupaka kwaye zisebenza ngokuskena ukupasa kwakho xa ungena. Ekusebenziseni indawo yokuhlala, la masango avulekile njengoko besiva imoto isiza. Ngenxa yenkxalabo yezokhuseleko, abanye abaninikhaya bakhetha ukusebenzisa kuphela izinzwa zokuphuma kunokuvumela nayiphi na imoto eqhuba ukuba ingene. Ezi zinokuthi, njengomzekelo wegaraji yokupaka, zisetelwe ukusabela kwisizathu esithile, nangona kunjalo.
Kukho ukhetho lokusebenzisa kude ukungena. Njengayo nayiphi na enye indawo ekude, ezi ndawo zingasetyenziswa-zihlala zikuluhlu olusondeleyo- ukuvula nokuvala amasango ngokucinezela iqhosha. Ukulungiselela lula, ezi zihlala zigcinwa kwizitshixo okanye zicinywe kwi-visor emotweni.
Iiphedi zamaqhosha zisenokusetyenziselwa ukuvumela abantu bangene kwaye baphume kwindlela yokungena. Ngokufana nephedi yamaqhosha kwinkqubo yokhuseleko, le opener inamaqhosha omzimba acinezelweyo kwipateni ethile yokuvumela ukungena okanye ukuphuma.
Olona khetho lwanamhlanje lokuvula ngokuzenzekelayo isango kukungena kwefowuni ephathekayo. Oku kuvumela abaninimzi ukuba bavule kwaye bavale isango labo ngokusebenzisa iapp.
Kukho uluhlu lweendlela zamashishini ahambayo okanye ezentengiso ezikhoyo. Ezi zinokusetyenziselwa iinjongo ezinjengokhuseleko, ukusebenza njengendawo yokurhafisa okanye apho kukho ukususwa okuphantsi okuphakathi kwezakhiwo ezibini.
Cinga malunga xa ungena kwigaraji yokupaka okanye udlula kwindawo yokurhafisa. Kukho ingalo okanye isango elithintela ukuhamba phambili de uhlawule umrhumo okanye ubonise isazisi sakho. Ezi ziindidi zamasango okuthintela.
La masango anikezelwe kuphela kulawulo lwezithuthi. Xa la masango evaliwe, akukho sithuthi siza kungena kwindlela. Kwelinye icala, ukuba ujonge isango eliyilwe kakuhle okanye elibonelela ngokhuseleko kunye nokuthintela ukugcwala kwabantu, oku akunakuba lolona khetho lufanelekileyo kuwe.
Amasango okuthintela ahlala esebenza ngengalo incamathele ngaphandle xa isango livaliwe kwaye liphakamisa ukuhlala ngokuthe nkqo xa isango livulekile. Ngenxa yoyilo, ezi ntlobo zamasango zifuna kuphela igumbi elaneleyo lofakelo lwesango lokuvula umbane.
Ukuba uyayithanda imbono yesango lesithintelo kodwa ufuna ukhuseleko ngakumbi nangasese, uya kuthi endaweni yoko wonwabe ukufunda malunga namasango ethe nkqo. Ezi zisebenzisa indlela efanayo yokuhamba njengamasango okuthintela kodwa endaweni yengalo elula, ezi zisebenzisa amasango apheleleyo anobungakanani obuziinyawo ezisi-8 okanye nangaphezulu.
Ngokufana namasango okuthintela, ufuna kuphela ngaphezulu kancinci kububanzi bendlela yakho yolu hlobo lwesango kuba iphakamisa ngokuthe nkqo endaweni yokufuna igumbi lokuya kwicala lendlela. Oku kubenza babe lukhetho olukhulu xa abaninimzi befuna ukhuseleko xa bengenalo igumbi lesango lesilayidi.
Njengoko sele kuphawuliwe, amasango okuthintela kunye namasango eepivot ngokuthe nkqo xa kuvaliwe kwaye kushenxiswa iidigri ezingama-90 ukuhlala nkqo emoyeni xa isango livulekile. Ukuma kweesango nkqo, kungenjalo, phakamisa ngokuthe tye emoyeni. Azenzi pivot okanye zitshintshe ii-engile; baphakamisa nje ngqo esibhakabhakeni.
La masango okunyusa nkqo afuna indawo enkulu njengesango lesilayidi kodwa oku kufuneka kume nkqo. Kwiindlela ezininzi zokuqhuba, oku kulungile, kuba abathintelwanga luhlobo lwesilingi okanye imigca yepropathi. Lilonke, eli sango lifuna indawo engaphezulu kwalo elingana nokuphakama kwesango. Umzekelo, ukuba usebenzisa i-8-feet ende yesango, uyakufuna ukuphakama kweenyawo ezili-16 ukusuka emhlabeni ukuya phezulu.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ezi ntlobo zamasango zibiza kakhulu ukufaka. Kananjalo, zihlala zisetyenziselwa ukusebenza endaweni yokuhlala. Ezi zezinye zeendlela ezinokukhuseleka ezikhoyo ezikhoyo, nangona kunjalo.
Into yokugqibela esiza kuyidlula lixabiso lesango lokuqhuba. Akukho xabiso linye lesango, njengoko unokuthelekelela kweli nqanaba, njengoko kukho inani leempawu kunye nokukhethwa koyilo okunokutshintsha ixabiso.
Ngokubanzi, isango lokuqhuba liqhuba iindleko phakathi kwe- $ 1,400 kunye ne- $ 3,200. Ipaneli enye yokhuni, isinyithi, kunye nentsimbi zihlala emazantsi ebala malunga ne- $ 1,400 ukuya kwi- $ 2,100. Eli xabiso lingahluka ngokuxhomekeke kuyilo kunye nobukhulu. La maxabiso ngamasango epaneli angatshatanga anokuzenzekelayo xa uswinga okanye usilayida.
Ukuhamba kwiipaneli zentsimbi, intsimbi kunye namasango enkuni, indleko iya kuba malunga ne-1,800 ukuya kwi-3,200 yeedola. Ezi zinokuzenzekelayo kodwa, kwakhona, iindleko ziyahluka ngenxa yesayizi kunye nesitayela osikhethayo.
Isango lekhithi yesango lokuhamba
Kukho iindleko ezongezelelekileyo ezinokunxulunyaniswa namasango aqhubayo. Ukuqala, makhe sijonge kwi-automation. Iikiti ezizenzekelayo zamasango epaneli enye ukujika iindleko ezivulekileyo $ 850 ukuya kwi- $ 2,300. Kumasango eepaneli ezimbini, le ndleko inyuka iye kwi-900 ukuya kwi-4 500 yeedola. Ungahlala kwisiphelo esisezantsi ngokukhetha amasango e-AC aneemoto ezincinci kunokuba amasango anikwe amandla elanga aneemoto ezinkulu. Iikiti ezizisebenzelayo ezisetyenziselwa ukudala amasango atyibilikayo zibiza malunga ne- $ 550 ukuya kwi- $ 2,150.
Iiyunithi zokulawula ezinje ngee-remotes, i-keypads, kunye ne-intercoms zingena kuluhlu olubanzi ukusuka ezantsi ukuya kuthi ga kwi-20 yeedola ukuya kuthi ga kwi-2,000 yeedola. Ukulawula okukude kuyona ndlela engabizi kakhulu kwi- $ 20 ukuya kuma-60. Iiphedi zamaqhosha zincinci ngaphezulu kwe- $ 50 ukuya kuma-250 eedola. Iiyunithi ze-Intercom okanye iiyunithi ezisebenzisa ngaphezulu kwendlela yolawulo lokufikelela zibiza kakhulu kwi- $ 350 ukuya kwi- $ 2,000.
Ukuba ufuna isivamvo esiza kuvula isango xa ushiya indlela, eza ngendleko ezongezelelweyo ze- $ 140 ukuya kwi- $ 200. Ukuguqula iindlela kunokubiza i-150 yeedola ukuya kwi-200 yeedola. Kukho ezinye iindlela onokunciphisa iindleko nazo. Izixhobo ze-DIY driveway ezikhankanywe ngaphambili, umzekelo, zinokuphelisa iindleko zangaphandle zokufaka.
Ukubona ezinye izimvo ndwendwela eyethu iindlela zangoku iphepha lemifanekiso eyongezelelweyo kunye noyilo lwekhaya lakho.
Umqhubi weSango lezoRhwebo, uMqobo $ 2100.00$ 2976.00 umthengisi ogqibelele UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Lungisa i-A-Gate Isakhelo seSakhelo seSango soKwakha… $ 112.36$ 119.99 umthengisi ogqibelele (1334) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
IINKCUKACHA A3 Zenzekelayo Isango lokuvula iKiti ... $ 259,00$ 370.00 umthengisi ogqibelele (134) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ukuqengqeleka kweSilayidi seSilayidi seSilayidi esiQengqelekayo,… $ 232.09 umthengisi ogqibelele (17) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
izimvo zokubala zangasese
izinto zokwenza umhla
nxiba umama womtshakazi
iziqithi zasekhitshini zamatye
phezulu 100 r kunye b uthando iingoma
indlela yokuxelela ukuba idayimani ekhweleyo iyinyani
Ngaba u-bruno mars usisitabane